नेहाले खोलिन् हिमान्शसँगको ब्रेकअपको रहस्य | Makalukhabar.com
माघ २७, काठमाडौँ । बलिउडकी चर्चित गायिका नेहा कक्कडको आवाज युवापुस्ता माझ निकै नै लोकप्रिय छ । बलिउडमा उनको आवाजको जादु छुट्टै छ । नेहा पनि हासीखुशी नै देखिन्छिन् । तर रिल लाइफमा मात्रै । किनकि नेहाको रियल लाइफ हिमान्शसँगको ब्रेकअपपछि त्यति खुशी छैन, उनी दुःखी छिन् ।
केही समय अघि नेहा र हिमान्शको ब्रेकअप भएको थियो । उनले नै सामाजिक सञ्जालमार्फत् यसबारे जानकारी गराएकी थिइन् । ब्रेकअप पश्चात् नेहा टुटेकी थिइन् । तर ब्रेकअपको कारण खुलाएकी थिइनन् ।
हालसालै नेहाले एक अन्तर्वार्तामा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनसँग जोडिएका केही कुराहरु सार्वजनिक गरेकी छिन् । यसबाट उनी अझै पनि पीडामा नै छिन् भन्ने जनाउँछ ।
नेहाले भनिन्, ‘जब म हिमान्शसँग रिलेशनशिपमा थिएँ, मैँले आफ्नो परिवार र साथीभाइलाई समय दिन पाएकी थिइनँ । मैंले आफ्नो सारा समय र इनर्जी यस्तो मानिसलाई दिइरहेको थिएँ, जो यसको लायक नै थिएन । यसको बाबजुद पनि ऊ सदैव गुनासो गथ्र्यो कि मैंले उसलाई समय दिइनँ । म फेरि प्रेम गर्न तयार छैन । यस समय एक्लै रहनु नै मेरो खुशी हो । जे भयो त्यसमा म खुशी छु । किनकी यसबाट मैंले परिवार र साथी भाइको महत्व बुझें ।’
नेहाले अघि भनिन्, ‘त्यो चरण निकै नै कष्टपूर्ण थियो । हो म डिप्रेशनमा थिएँ । विछोडको सामना गर्नु नै मेरो खराब समय थियो । यद्यपी म अब पीडाबाट बाहिरिएकी छु । अहिले म यति मात्र भन्न सक्छु कि एक्लो रहनु मेरो जीवनको उत्तम अनुभूति हो ।’
केही दिन अघि नेहाले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै लेखेकि थिइन्, ‘सिंगल रहनुको ठूलो फाइदा, तपाईं समयमै सुत्न पाउनुहुन्छ ।’
नेहाले हालसालै नयाँ घर र कार किनेकी छिन् । यसबाहेक नेहाले एकपछि अर्को हिट गीत पनि दिइरहेकी छिन् ।
वीपी उद्यानमा शहीद पार्क शिलान्यास गरिएकोमा कांग्रेसको आपत्ति
सैफकाे सासुलाई देख्नसाथ सारा पुरूष भाग्नुकाे यस्ताे छ रहस्य
असार १०, भारत । सन् १९७५ देखि १९७७ सम्म भारतमा संकटकाल लगाइएको थियो । त्यति नै बेला भारतमा पुरुष बन्ध्याकरणको अभियान पनि चलाइएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीका कान्छा छोरा संजय गान्धीले रुखसाना सुल्तानालाई पुरानो दिल्लीका मुसलमानको बन्ध्याकरण गराउनका लागि राजी गराउने जिम्मा सुम्पिएक... जारी राख्नुहोस...
टाइगर श्राफ र दिशा पटानीको किन भयाे ब्रेकअप ?
असार १०, काठमाडौं । बलिउड अभिनेता टाइगर श्राफ र दिशा पटानीबीचको ३ वर्षको प्रेममा पूर्णबिराम लागेको छ । पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको यो जोडी औपचारिक रुपममै सम्बन्ध टुंग्याउने निर्णयमा पुगेको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । केही समय अघि विवाहको चर्चामा चुलिएको यो जोडीले अब प्रेमीको नभइ म... जारी राख्नुहोस...
बलिउडका किंग खान आखिर के कारणले भए बेरोजगार ?
असार ९, भारत । बलिउड फिल्म अभिनेता शाहरुख खानले आफू आजकाल बेरोजगार भएको स्विकारेका छन् । शाहरुख खानले एक अन्तरवार्तामा यतिबेला आफूसँग कुनै फिल्म नभएको जानकारी दिएका छन् । शाहरुख खानको पछिल्लो फिल्म जिरो थियो जुन बक्स अफिसमा नराम्रोसँग फ्लप भएको थियो । यसअघि शाहरुखलाई थुप्रै फिल्मको प्रस्ताव आएको वि... जारी राख्नुहोस...
शिल्पाले यी बालिकाको गोडा चुम्दा किन ट्रोलको सिकार भइन् ?
असार ९, भारत। बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी सामाजिक सञ्जालमा ट्रोलको सिकार भएकी छिन् । ‘सुपर डान्सर च्याप्टर –३’ की प्रतिष्पर्धीको गोडा चुमिरहेको तस्विरका कारण उनी भाइरल भएकी हुन् । शिल्पा उक्त रियालीटी शोकी जज पनि हुन् । उनले रियालीटी शोको क्रममा ६ वर्षीय प्रतिष्पर्धी रुप्साको गो... जारी राख्नुहोस...
बलिउडकी यी सुन्दरीले लन्च गरिन याेगा एप्स
असार ८, भारत । २१ जुनमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइन्छ । बलिउडका धेरै कलाकारहरु योगासँग जोडिन् र योगा गर्न आग्रह गर्छन् । बलिउडमा योगाको कुरा गर्ने बित्तिकै शिल्पा शेट्टीको नाम अगाडि आउँछ । बलिउडकी यी सुन्दरी शिल्पाले हालसालै‘शिल्पा शेट्टी योगा’ नामक एप्स लन्च गरेकी छिन् । यस एप्सले य... जारी राख्नुहोस...
यस कारण माधुरीको डान्स पर्फेक्ट
असार ८ । बलिउडकी धक–धक गर्ल माधुरी दीक्षितले अभिनय र नृत्यबाट दर्शकको मन जितेकी छिन् । उनको फ्यान फलोइङ एकदमै राम्रो छ । उनले ३ वर्षको उमेर देखि नै कथक डान्स ट्रेनिङ्ग लिएकी थिइन् । माधुरीले ८ वर्षको उमेरमा स्टेज परफर्मेन्स दिएकी थिइन् । माधुरीले डान्स रियालिटी शो ‘डान्स दिवाने सीजन २&r... जारी राख्नुहोस...
बलिउड सलमान आलियासँग राेमान्स गर्दै
असार ८ । बलिउडका सुल्तान सलमान खान र आलिया भट्ट पहिलोपटक फिल्मी पर्दामा देखिन लागेका छन् । संजय लीला भन्सालीको नयाँ फिल्म ‘इन्साल्लाह’मा काम गर्न लागेका हुन् । लामो समयपछि सँगै काम गर्न लागेका सलमान खानले पहिलोपटक ‘हम दिल दे चुके सनम’ मा काम गरेका थिए । उक्त फिल्ममा ऐश्वर्या... जारी राख्नुहोस...
शहिदले किन आफैंले खेलेको चलचित्रलाई समयको बर्वादी भने ?
असार ६, भारत । फिल्म कबिर सिंहमा रिसाहा जँड्याहा डाक्टरको भूमिका निभाउने शाहिद कपुरले हालै आफ्ना फिल्मप्रति आफ्नो प्रेमबारे कुरा गरेका छन् । उनले आफ्ना केही फिल्म समयको बर्बादी मात्र भएको बताउँदै ती कहिले पनि हेर्न नरुचाउने खुलासासमेत गरेका छन् । उनका अनुसार गुरुदत्तको फिल्म प्यासा र साशिब बीबी र ग... जारी राख्नुहोस...